U-Elokenz: Ngokuphinda ubuyisele isiQulatho seSayithi saKho esona siBalaseleyo kwiiMidiya zoLuntu | Martech Zone
U-Elokenz: Ngokuphindaphindiweyo Phindisela umxholo wakho oSebenza ngokuGqwesileyo kwimithombo yeendaba
NgoLwesibini, nge-1 kaDisemba ngo-2020 NgoLwesibini, nge-1 kaDisemba ngo-2020 Douglas Karr
Abathengisi bayile ngokwendalo kwaye ndiyakholelwa ukuba ngamanye amaxesha kukwayinto eyenzakalisa ishishini labo. Yinto endiqhubeka nokuzikhumbuza ngayo ngamanqaku am. Ndidla ngokuntywila ndingena nzulu kwizixhobo nakubuchule… ndilibale ukuba kukho iindwendwe ezingakhange zikoluhambo nam.
Kwiinkampani, oku kukongamela okukhulu. Njengoko beqhubeka nokucinga kunye nokuhambisa umxholo, bayalibala ukuba kukho abantu abathile abanokuthi bangazi neqonga labo okanye umxholo omkhulu abanokuwupapasha kwinyanga ephelileyo, kunyaka ophelileyo, okanye nangaphezulu okubonelela ngolwazi abaludingayo.
Esi sesona sizathu siphambili sokuba sibatyhalele abathengi bethu ukuba basebenzise (kwaye siphuhlisa) a ilayibrari yomxholo kwindawo yabo. Isicwangciso seelayibrari yomxholo siqinisekisa ukuba iqela lakho lokuthengisa lihlala lijolise kwizihloko, kumzi mveliso, kumanqanaba, nakwi-personas yazo zonke iindwendwe ezifika kwindawo yakho. Umsebenzi wakho ayikokuvelisa imijelo engapheliyo yomxholo omtsha… kukuqinisekisa ukuba unethala leencwadi elipheleleyo elihlaziyiweyo kwaye liphuculwe ngokuhamba kwexesha.
Ukubuyela kwimithombo yeendaba
Olunye ukongamela yimidiya yoluntu. Ukuthunyelwa kwakhona kwimidiya yoluntu ngamanye amaxesha kungabonakala ngathi kukugaxekile… kodwa kunyanzelekile kuba umlandeli owufumene kwinyanga ephelileyo khange afunde kwaye ucofe kuhlaziyo lwakho lweendaba zentlalo kunyaka ophelileyo okanye njalo. Kuya kufuneka uphathe umxholo wakho wemidiya yoluntu njengomjelo ojikeleziweyo… uphakamise ilayibrari yakho kubalandeli kuwo onke amabakala kuhambo lwabo (hayi olwakho).
Akunjalo kulula, nangona kunjalo. Ukuba wakha umgca kwaye ulayishe uhlaziyo lwentlalo ukubetha abaphulaphuli bakho… oko kungakhokelela ukudinwa kwezentlalo. Ukudinwa kwezentlalo kungenza itoni yokonakalisa uphawu lwakho ngokuqhuba ushiye kwaye abalandeli bakushiye kuba bengaboni ixabiso kwizithuba eziphindaphindwayo ozenzayo. Ukuphinda kubukrelekrele kubalulekile - kubenza ukuba bufike ngexesha kodwa hayi rhoqo… ukudibanisa umxholo omtsha kwaye uhlala uhlaziya umxholo omdala ukuqhuba ukuzibandakanya.
Ukuhanjiswa kweNtengiso ye-Elokenz Smart
Elokenz Umgca okrelekrele, ogcwalisa ngokuzenzekelayo ohlalutya umxholo wakho, ufunda ukuba ngowuphi umxholo onokwabelana ngawo ngokusekwe kukuziphatha kwabaphulaphuli bakho, kwaye uthathe isigqibo sokuba ngowuphi umxholo oza kwabelana ngawo kwiqonga ngalinye leendaba zentlalo.
U-Elokenz usebenza ngamanyathelo ama-4 alula:
Ngenisa isiqwengana somxholo -Umxholo wakho ungeniswe kwi-Elokenz kwaye uboniswa kwilayibrari yezixhobo.
Khetha iiakhawunti zemidiya yoluntu -Khetha amaqonga amanqaku akho aza kuphinda athunyelwe kuwo. U-Elokenz unakekele ukukhuthazwa komxholo wakho.
Yenza uhlaziyo lwemo ezininzi -Elokenz ikwenza ukuba wenze iiyantlukwano ezininzi njengoko ufuna ngeqonga ngalinye. Isixhobo siya kukhetha uhlobo olwahlukileyo ngalo lonke ixesha kuthunyelwa inqaku lakho kwakhona.
Hlaziya ukufikelela kwakho kwaye uphucule umxholo wakho -Iqonga lixhobisa abathengisi ukuba babone uhlobo lomxholo kunye nohlaziyo olusebenze ngcono ukutsala iindwendwe ezintsha kunye nokuqhuba ngakumbi.
Ndiyakuthanda ukusebenzisa esi sixhobo - kulula ukucwangcisa izabelo zentlalo kunye nethala leencwadi i-Elokenz ye-RSS feeds endiyakhileyo. Ndiyazithanda i-analytics zabo ukuze ndibone ukuba yintoni esebenzayo kunxibelelwano ngalunye lwasentlalweni. Ungahlela isabelo ngasinye ngokukhawuleza!
U-Lisa Sicard, Khuthaza ukuphumelela
Elokenz ikunceda ugcine ixesha kwimisebenzi yemihla ngemihla yemithombo yeendaba kunye nokufikelela kubathengi abaninzi ngokusebenzisa umxholo wakho ngokuzeleyo. Ungayichazanga eyokuba uya kwandisa imbuyekezo kutyalo-mali kwinqaku ngalinye eliya kuqhuba ukugcwala kunye nokukhokelela!
Qalisa Uvavanyo lwakho lweentsuku ezingama-30 lwe-Elokenz
Ukubhengezwa: Ndililungu okanye Elokenz.
tags: Elona xesha lilungileyo lokuthumelaukuhanjiswa komxholoilayibrari yomxholoelokenzFacebookLinkedInkwakhonaishedyuli yezithubaukuhlela umxholoukuhlela izithuba zemidiya yoluntuukudinwa kwezentlaloImidiya yokuncokolaImigca yemidiya yoluntuiposti yentlalontleTwitter